Amiirka Al-Shabaab Walaalkiis oo ka sheekeenaya Dhibaatooyin badan ay Qoyskiisa kala kulmaan la dhalashada Axmed Godane | warsugansomaliya.wordpress.com
Muqtaar Cabdi Godane waxa uu la dhashay Amiirka Guud ee Xarakada Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane waxa uu kunool yahay Magaalada Hargeysa ee Maamulka Somalialand ,waxaana dhawaan laga soo daayay xabsiga Hargeysa kadib dhoor bil uu halkaasi ku xirnaa.
Ninkan la dhashay Amiirka Al-Shabaab ayaa xabsiga ku jiray mudo la eg 4-bilood , waxaa sidoo kale Xabsiga Dhaxe ee Magaalada Hargeysa wali ku xiran Nin kale oo isna la dhashay Amiirka Al-Shabaab kana mid ahaa Ciidamada Maamulka Somaliland.
Muqtaar waxa uu xusay waxa loo xiray kaliya in ay tahay wada dhalashada ay la dhasheen Amiirka Al-Shabaab balse aysan jirin wax dambi ah ay galeen , waxa uuna cadeeyay in loo dhibaateeyo markasta in ay la dhasheen Amiirka Al-Shabaab.
“Annigu afar bilood ayaan xidhnaa, sabab macquul ah oo aan u xidhnaana ilaa hadda ma garanayo…sidoo kale Walaalkay oo ciidanka qaranka ah oo markii la I xidhay ka dib la qabtayna muddo ayuu iska xidhanyahay oo Saldhiga dhexe ku jiraa. wax loo haystaana waa waxaad walaalo-tihiin Axmed Godane. Taasina gar iyo dow midna maaha, waayo, Qofku ma doorto meesha uu ku dhalanayo iyo cidda uu la dhalanayo midna.. Mida kale, qofna qof kale danbigiisa looma ciqaabi karro.” Ayuu yiri Muqtaar Cabdi Godane.
Ninkan la dhashay Amiirka Al-Shabaab ayaa sidoo kale xusay in Magaalada Hargeysa ay ku heesato tacadiyo aad u xun isaga iyo Qoyskiisa markasatana loo xiro ama loo beegsado kaliya waxaad la dhalateen Amiirka Al-Shabaab waxa uuna xusay isagu in Xabsiga laga soo daayay mudo 4-bil uu xirnaa kadib markii lagu waayay wax dambi ah sida uu cadeeyay.
Muqtaar Godane ayaa sidoo kale sheegay in kunoolaanshiyaha Deegaanada Somaliland ay dhib badan ku qabaan iyaga oo muwaadiniin ah waxa uuna ugu baaqay Maamulka Somaliland in ay soo daayaan Walaalkiis oo askari ah dhibka lagu hayo Qoyskoodana ay wax ka qabato.
”waxaan Leeyahay cabsi iyo xadhig uun kuma jiri karnee, haddii la leeyahay muwaadiniin Soomaalilnad ma tihidin xaq u leh inay dalkoodda si xor ah ugu noolaadaan halla noo sheego…haddii kale, culayska hala naga daayo sidan nolol maahanee” ayuu ku cataabay Muqtaar Aw Cbadi Godane.
Hadalkan kasoo yeeray Ninkan la dhashay Amiirka Al-Shabaab ayaa imaanaya xili Maamulka Somaliland ay aad ula socdaan dhaq dhaqaaqa Guriga ay Hargeysa kaga nool yihiin Qoyska Amiirka Al-Shabaab oo isagu asal ahaan kasoo Jeeda Deeagaanada Somaliland balse aan fara galin nolosha iyo nabada Deegaanadaasi ka jirta halka Dagaalo , qaraxyo iyo tacadiyo kalana Kooxdiisa ka geestaan Koonfurta Soomaaliya .
← DAAWOSHO+DHAGEYSASHO:Xaalada Qaahira oo cirka isku shareertay maanta noqotayna xarun dhiig.
Rag Isbiirsadey oo ka Faa’ideystey Hadalkii Madaxweynaha Somalia iyo Dhacdooyin Xanuun badan oo arintaasi ka dhashay!!. →